21 Ndị Izrel ṅụrụ iyi na Mizpa,+ sị: “Ọ dịghị onye ọ bụla n’ime anyị ga-akpọnye Benjamin nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ nwunye ya.”+ 2 Ndị Izrel wee bịa na Betel+ ma nọdụ ọdụ n’ebe ahụ n’ihu ezi Chineke+ ruo ná mgbede ma nọrọ na-akwa ákwá nke ukwuu n’olu dara ụda.+ 3 Ha nọkwa na-asị: “Jehova bụ́ Chineke Izrel, gịnị mere ihe a ji mee n’Izrel, na otu ebo agakwaghị adị n’Izrel taa?”+ 4 O wee ruo n’echi ya na ndị mmadụ biliri n’isi ụtụtụ wee wuo ebe ịchụàjà n’ebe ahụ ma chụọ àjà nsure ọkụ+ na àjà udo.+ 5 Ụmụ Izrel wee sị: “Ònye n’ime ebo niile nke Izrel bụ onye na-abịaghị n’ọgbakọ a n’ihu Jehova, n’ihi na e nwere iyi dị ukwuu+ a ṅụrụ banyere onye na-abịaghị n’ihu Jehova na Mizpa, sị, ‘Ka e gbuo ya.’”+ 6 Ụmụ Izrel wee malite inwe mwute n’ihi Benjamin nwanne ha. Ha wee sị: “Taa, e bipụwo otu ebo n’Izrel. 7 Olee ihe anyị ga-emere ndị ikom fọdụrụnụ ka ha wee nweta nwunye, ebe ọ bụ na anyị ejiriwo Jehova ṅụọ iyi+ na anyị agaghị akpọnye ha nke ọ bụla n’ime ụmụ anyị ndị inyom ka ha lụwa?”+ 8 Ha wee gaa n’ihu ịsị: “Olee ebo Izrel nke na-abịaghị na Mizpa+ n’ihu Jehova?” Ma, lee! ọ dịghị onye si Jebesh-gilied+ nke bịara n’ọgbakọ a. 9 Mgbe a gụrụ ndị mmadụ ọnụ, lee! ọ dịghị onye ọ bụla bi na Jebesh-gilied bịaranụ. 10 N’ihi ya, nzukọ ahụ zipụrụ puku mmadụ iri na abụọ n’etiti ndị kasị bụrụ dike n’ebe ahụ wee nye ha iwu, sị: “Gaanụ, jirikwanụ ihu mma agha gbuo ndị bi na Jebesh-gilied, ọbụna ndị inyom na ụmụntakịrị.+ 11 Nke a bụ ihe unu ga-eme: Gbuonụ nwoke ọ bụla na nwaanyị ọ bụla ya na nwoke dinatụworo.”+ 12 Otú ọ dị, ha nwetara n’etiti ndị bi na Jebesh-gilied+ narị ụmụ agbọghọ anọ, ndị na-amaghị nwoke,+ ndị ha na nwoke na-enwetụbeghị mmekọahụ site n’iso nwoke dinaa. Ha wee kpọta ha n’ebe ha mara ụlọikwuu na Shaịlo,+ nke dị n’ala Kenan. 13 Nzukọ ahụ dum wee zipụ ozi gwa ụmụ Benjamin nọ na nkume dị elu nke Rimọn+ ka e mee udo. 14 Benjamin wee lọta n’oge ahụ. Ha wee kpọnye ha ndị inyom ha hapụrụ ndụ n’ime ndị inyom Jebesh-gilied;+ ma ha enwetaghị mmadụ ole zuuru ha.+ 15 Ndị Izrel wee nwee mwute n’ihi Benjamin,+ n’ihi na Jehova emewo ka nkewa dịrị n’etiti ebo niile nke Izrel. 16 Ndị okenye nzukọ ahụ wee sị: “Olee ihe anyị ga-eme ka ndị ikom fọdụrụnụ nweta nwunye, n’ihi na a lawo ụmụ nwaanyị n’iyi na Benjamin?” 17 Ha wee sị: “Ndị Benjamin fọrọ ndụ+ kwesịrị inweta ihe nketa, ka a ghara ikpochapụ otu ebo n’Izrel. 18 Ma anyị agaghị akpọnye ha ụmụ anyị ndị inyom ka ha lụwa, n’ihi na ụmụ Izrel aṅụwo iyi, sị, ‘Onye a bụrụ ọnụ ka onye ga-ekenye Benjamin nwunye bụ.’”+ 19 N’ikpeazụ, ha sịrị: “Lee! E nwere ememme a na-emere Jehova site n’afọ ruo n’afọ na Shaịlo,+ nke dị n’ebe ugwu Betel, n’ebe ọwụwa anyanwụ nke okporo ụzọ si Betel gbagoo Shikem,+ nke dị n’ebe ndịda Lebona.” 20 Ha wee nye ụmụ Benjamin iwu, sị: “Gaanụ zoo n’ubi vaịn. 21 Lewenụ anya, mgbe ọ bụla ndị inyom Shaịlo ga-apụta ite egwú+ a na-agba gburugburu na-ete, unu ga-esi n’ubi vaịn mapụta, onye ọ bụla ga-eburu otu n’ime ndị inyom Shaịlo, unu ga-alakwa n’ala Benjamin. 22 Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na nna ha ma ọ bụ ụmụnne ha abịa isesa anyị okwu, anyị onwe anyị ga-asịkwa ha, ‘Biko, meerenụ anyị amara n’ihi ha, n’ihi na onye ọ bụla n’ime anyị enwetaghị nwunye site n’agha,+ n’ihi na ọ bụghị unu kpọọrọ ha kpọnye ha nke ga-eme ka iyi unu ṅụrụ jide unu.’”+ 23 Ụmụ Benjamin wee mee nnọọ otú ahụ, ha wee buru ụmụ nwaanyị ole ha dị,+ n’etiti ndị inyom na-ete egwú,+ bụ́ ndị ha buuru n’ike; e mesịa, ha laghachiri n’ihe nketa ha ma wuo obodo dị iche iche+ wee biri n’ime ha. 24 Ụmụ Izrel wee si n’ebe ahụ lasasịa n’oge ahụ, onye nke ọ bụla n’ebo ya nakwa n’ezinụlọ ya; ha wee si n’ebe ahụ laa, onye nke ọ bụla n’ihe nketa ya.+ 25 N’oge ahụ, e nweghị eze n’Izrel.+ Onye ọ bụla na-eme ihe dị ya mma.+